You are here: Home / Archives ee Faransiiska
Bixinta qashin-qubka! Maqnaansho lagama maarmaan ah
Faransiiska - Inta badan marka aynu hadlayno dib u warshadaynta bateriga, waxaa loo baahan yahay in lagu jajabiyo si ay u soo qaataan biraha qaaliga ah. Ma aha habka Farouk Tedjar. Nidaamkiisu aad ayuu uga fog yahay Waxaan kugu martiqaadayaa inaad ogaatid mucjisada cajiibka ah!
Filed Under: Baytariyada Tagged Iyada oo: France